Google Na-azụ Ndị Ọkwọ ụgbọ Epeepe Dị Mkpa Na Njiji Google Maps [Nkwupụta]
7 afọ gara aga
Coverdor weputara Fruiti, ihe izizi Open Insurance API nke Naijiria
FATE Foundation kwuwaputara akara ugo 2020 FATE
4 awa gara aga
Lablọ nyocha na-agbagha agbagha na-enye ndị mbido mpaghara mpaghara mmiri iji wepụta ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na Gambia
5 awa gara aga
Nkwado Catalyst & Briter Bridges weputara State of Fintech Report na Emerging Markets
7 awa gara aga
e-Residency na-agbasawanye na Africa, na-ebupụta Ntanetị Ọhụrụ ọhụụ n'ofe ụwa
Founder Institute Lagos nwere nnọkọ na arịa ọgụgụ isi
Ijikọ Teknụzụ n'ime Iwu na-eme ka ikike mmadụ niile kwado iwu - Catherine Jane Paulse, onye na-akwado ngalaba, Lens Legal
Naịjirịa ga - emezi mkpokọta AfọLabs afọ 2021
Tinye: Mmemme Accelerator Facebook Community 2021 ($ 50K ego)
LG onye mmeri E-Sports mmepe na Nigeria na OLED Gaming Challenge
Lami Insurtech Startup na-enweta $ 1.8 M iji chụọ Insurance Digital
UK-Nigeria Tech Hub GreenTech Mmemme mechiri ngwa ngwa
7th June 2014. Arochukwu. Easy Taxi Nigeria kpebiri inwe nzukọ nkuzi na ihe mmụta n'oge nzukọ kwa ọnwa ọkwọ ụgbọala site n'ịkpọ ndị ọrụ si Google Nigeria ka ha zụọ ndị ọkwọ ụgbọ ala maka ojiji na mkpa Google map na Global GPS n'ọnọdu GPS. Ndi Easy Taxi Nigeria haziri mkpoko a site na mmekorita ya na Google na nzaghachi oke onodu-ogugu n'etiti ndi na-achi Lagos maka iji map na GPS. Easy Taxi na-achọpụta na eserese bụ ngwa ọrụ dị oke mkpa maka ịgagharị ma ọ dị mkpa ka ndị ọkwọ ụgbọ ala ya rite uru na mkpa GPS n'ihe metụtara nsuso, nchekwa na iji ya mee ihe n'okwu gbasara ịchọta mpaghara gburugburu Lagos.
N'oge ngosi ihe nkiri slide na ụzọ ziri ezi iji chọọ ebe dị na Lagos, Maazị Adepoju gbara ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ ume ka ha nabata ojiji nke map Google n'ihi na ọ ga-eme ka ha mata ụzọ kachasị mma ma kachasị ọsọ gaa ebe ha na-aga ndị ahịa ha dị mfe kamakwa ebe dị anya site na isi ha ruo ebe ndị ahịa nọ.
A mara ọkwa na ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mfe ga-etinye ihe ha mụtara n'oge ọgbakọ ahụ site na isonyere Google ka hazie mpaghara niile nke Lagos nke na-enweghị oghere iji mepụta map Google ziri ezi nke Lagos State.
N’ikwu okwu n’ọgbakọ ahụ, Maazị Okoya Cosmas, otu n’ime ndị ọkwọ ụgbọala ‘Easy Taxi’ kwuru na kemgbe ọ sonyeere Easy Taxi Naịjirịa ihe karịrị ọnwa asatọ gara aga, na ya akwanyelarị ụzọ ọ na-esi enye ndị ahịa ya ọrụ na nke ahụ site n’ihe ọ mụtara n’oge nkuzi ahụ ; ọ ga-enwe ike iru ngwa ahịa ya ngwa ngwa.
Onye isi oche nke Easy Taxi Nigeria, Bankole Cardoso kwuru na ọgbakọ a na-ekwupụta na ọ nwere mpako na ndị ọkwọ ụgbọ ala Easy Taxi nwere ike ịsọ mpi ugbu a na ndị ọkwọ ụgbọ ala mba ụwa bụ ndị amarala banyere ojiji Google map. Ikwado nke a bụ nkwupụta sitere na Easy Taxi, Onye njikwa obodo, Miss Rita Achebe.
Miss Rita kwuru na 'site n'ọzụzụ ndị ọkaibe Easy Taxi Naịjirịa natara taa, ha ga-enwe ike ịbịakwute ndị ahịa ha ọsịsọ ma dịkwa mfe nke ga-eme ka ndị ahịa anyị na-eche oge.
Banyere Mfe tagzi
Easy Taxi bụ ọrụ tagzi nke na-arụ ọrụ site na iji ngwa mkpanaka iji jikọọ ndị ọkwọ ụgbọala nọọrọ onwe ha ka ha debanyere aha ndị Easy Taxi na ndị njem n'ụzọ dị mfe, dị mfe ma dịkwa nchebe. Easy Taxi malitere ọrụ na Nigeria na July 2013.
Techamaka weputara Mmemme Digital Literacy iji zụọ ụmụ agbọghọ Naịjirịa